ရှုပါ၊ စဉ်းစားပါ၊ ဆင်ခြင်ပါ	Posted on April 17, 2013	by mettayate မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမှ (၇)နှစ်သား ရှင်ရာဟုလာသာမဏေအား တရားဟောရန်အတွက် ရှင်ရာဟုလာသတင်းသုံးနေထိုင်ရာ ကြွလာရာ သရက်ပင်အောက်၌ အင်တုံတွင်းရှိ ရေကို အကြောင်းပြု၍ ဆုံးမစကား တရားဟောလေသည်။
This entry was posted in ကောက်နှုတ်မှုများ. Bookmark the permalink.	← Previous Post